के तपाईको टाउको धेरै नै दुख्छ ? यस्ता छन् निको पार्ने घरेलु उपाय « KathmanduPati
के तपाईको टाउको धेरै नै दुख्छ ? यस्ता छन् निको पार्ने घरेलु उपाय
प्रकाशित मिति : २०७५, १७ माघ बिहीबार १३:१४
काठमाडौं – अधिकांश व्यक्ति टाउको दुख्ने गरेको समस्या सुनाउँछन् । टाउकोदुखाइले दैनिक काममै समस्या ल्याइदिन्छ । कसैलाई अन्य समस्याविना नै टाउको दुख्छ भने कसैलाई मानसिक समस्याले टाउको दुखाउँछ । कुनै टाउकोदुखाइ एक–दुई दिनमै निको हुन्छ भने कुनैलाई वर्षौं उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैलाई सामान्य औषधिले सन्चो गराए पनि फेरि बल्झिन्छ ।
रिपोर्ट सबै समान्य छ, तर टाउको भने दुखिरहन्छ भने मानसिक समस्याले हुन सक्छ । तनाब र माइग्रेनका कारण पनि टाउको दुख्छ । वर्षौंदेखि टाउको दुखिरहेको, सबैतिर दुख्ने, टाउको भारी भएजस्तो हुने लक्षणहरू देखिन्छन् । टाउको गह्रौँ भएजस्तो या किरा हिँडेजस्तो पनि हुन्छ । चक्कर लाग्ने, मन्द–मन्द निरन्तर दुखिरहने समस्या पनि टेन्सन हेडेकमा हुन्छ । यो समस्या सामान्य औषधि खाएर पनि निको हुन्छ । कुनै तनाब, निद्रामा गडबढीलगायत कारण यो समस्या हुन्छ ।
टाउको दुख्दा बल्किने, दुखेपछि चार घण्टादेखि दुई दिनसम्म दुखिरहने, उल्टी आउलाजस्तो हुने र आइहाल्ने पनि हुन्छ । यो समस्यामा कडा औषधि खानुपर्ने, इन्जेक्सन लगाउनुपर्ने हुन्छ । कसैलाई सुत्नैपर्ने हुन सक्छ । माइग्रेनका कारण टाउको दुख्नेहरूलाई घामले र आवाजले पनि फरक पार्न सक्छ । कसैलाई त हिँडडुल गर्दा पनि टाउकोदुखाइ बढ्ने भएकाले घरभित्रै आराम गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैको एकपाटो मात्रै टाउको दुख्ने पनि हुन्छ, तर सधैँ एकपाटो मात्र दुख्ने भन्नेचाहिँ नहुन सक्छ ।
यस्ता छन् टाउको दुखाईबाट छुटकारा पाउने घरेलु उपचार
पुदिनाः माइग्रेनको उपचारमा पुदिना निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यदि तपाईंलाई लगातार टाउको दुखिरहन्छ भने तपाईंले पुदिनलाई चियामा मिसाएर पिउन सक्नुहुन्छ । यसले तपाईंलाई तुरुन्त राहत प्रदान गर्छ ।
नुनको पेष्टः टाउको दुखाईका लागि ल्वाङ र नुनको पेष्ट एक प्रभावकारी उपचार पद्धती मानिन्छ । ल्वाङको पाउडर र नुनलाई दुधमा मिसाएर पिउनुहोस् । नुनमा हाइग्रस्कापिक गुण पाइन्छ जसले टाउको दुखाईबाट आराम मिल्दछ ।
दालचिनी पाउडर पेष्टः टाउको दुखाईबाट आराम पाउनका लागि दालचिनी पाउडर पेष्ट एउटा राम्रो तरिका हो । उपयोगका लागि दालचिनी पिसेर पाउडर बनाउनुहोस् र यसलाई पानी हालेर बाक्लो पेष्ट बनाउनुहोस् । अब यो पेष्टलाई टाउकोमा लगाउनुहोस् । यसले तपाईंको दुखेर भारी भएको टाउको छिट्टै हल्का हुन्छ ।
कागती र तातो पानीः लगातार टाउको दुखिरहन्छ भने एक ग्लास तातो पानीमा कागतीको रस मिसाएर पिउनुहोस् । किनभने धेरैपटक पेटमा ग्याँस बनेका कारण पनि टाउको दुख्ने गर्दछ र कागती पानीले ग्याँसको समस्या हल गर्नुका साथै टाउकोको दुखाई पनि कम गर्दछ ।
लसुनको रस पिउनुहोस : लसुनको रस पिउँदा लगातार दुख्ने तपाईंको टाउकोले राहत महसुस गर्दछ । यसलाई तयार गर्नका लागि लसुनका केही टुक्रा लिनुहोस् र यसलाई निचोरेर रस निकाल्नुहोस् र कम्तीमा पनि एक चम्चा रस पिउनुहोस् । वास्तवमा लसुन एक पेनकिलर पनि हो, यसले टाउको दुख्न कम गराउँछ ।
धनियाँ, जीरा र अदुवाको रस पिउनुहोसः धनियाँको पात, जीरा र अदुवा राखेर बनाएको चिया पिउनाले पनि लगातार दुखिरहने तपाईंको टाउको कम हुने गर्दछ । यसलाई बनाउनका लागि थोरै तातो पानी लिनुहोस् र यसमा धनियाँ, जिरा र अदुवा यी तीनथरी हालेर पाँच मिनेटसम्म उमाल्नुहोस् । राम्रो परिणामका लागि यसलाई कम्तीमा पनि दिनको दुई पटक पिउनुहोस् ।
चिनियां राष्ट्रपति सी चढ्ने कारको मुल्य ८ करोड ,जहाजको मुल्य…
काठमाडौं –चिनियां राष्ट्रपति सी चिनफिङ २ दिने राजकीय भ्रमणको लागी
आज असोज ११ गते शनिबार, कुन राशिको फल कस्तो हेर्नुहोस
११ आश्विन २०७६, शनिबार वि.सं.२०७६ असोज ११ गते शनिबार. इ.स.
यस्ता छन् तातोपानी पिउनुका दश फाइदा
काठमाडौं – पानी स्वास्थ्यको लागि निकै उपयोगी पदार्थ हो ।
किन बढ्दैछ सम्बन्धविच्छेद ?
काठमाडौं – जीवनमा विवाह एकपटक मात्र गरिन्छ जसलाई हाम्रो समाजमा
२१ डीएसपीको काज सरुवा, को कहाँ पुगे ?